HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAIL NEWS PAPAR EE MAANTA OO AH KHAMIIS 6-DA JUUN 2019-KA
Thursday June 06, 2019 - 10:25:58 in Wararka by Mogadishu Times
QM OO DIGNIIN KASOO SAARTAY HALISTA KA DHALAN KARTA ABAARTA SOOMAALIYA Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in (Shan milyan iyo afar boqol oo kun) oo Soomaali ah oo ay saameyeen aba aro sii xumaanaya oo ka jira Soomaaliya ay halis
QM OO DIGNIIN KASOO SAARTAY HALISTA KA DHALAN KARTA ABAARTA SOOMAALIYA Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in (Shan milyan iyo afar boqol oo kun) oo Soomaali ah oo ay saameyeen aba aro sii xumaanaya oo ka jira Soomaaliya ay halis ugu jiraan in bisha soo socoto ay wa jahaan cunto yari aad u daran, ha ddii aanan si deg deg loo helin gargaar naf badbaadin ah.
Hay’addu waxa ay sheegtay in ab aarahaan oo la xiriira dhinaca cimilada ay yihiin kuwo kusoo laab laabtay Soom aali ya ,tani ayaa sii murjineysa xaalada nololeed ee mallaayin qof oo ay mar ho re soo barakiciyeen colaada gaamurtay ee ka taa gan Soomaaliya.
Musiibadan ayaa imaaneysa xilli ay Soomaalida bilaabeen inay kasoo kabta an saameyntii ay ku reebtay abaar socot ay mudo laba sano ah taas oo soo dha maatay sanadkii 2017,abaartaas ayaa waxaa ay ku qasabtay inay guryahooda ka cararaan in ka badan hal Milyan oo qof si ay u raadsadaan Cunto,biyo iyo Shaqo.
UNHCR ayaa ku warantay in abaar ta hadda ka jirta Soomaaliya ay ilaa iyo hadda ku barakaceen dad gaarayaa 50 Kun oo Ruux.
Afhayeen u hadlay Hay’addani oo lagu Magacaabo Bieber Bloch ayaa sheegay in cunta yarida ay mar hore bilaabat ay,isaga oo ka digay in waqtiga uu aad u yaryahay si loo gaaro dadka ay saa meysay abaarta, waxaana uu intaasi raa ciyay in Bisha soo socota ay xaalada aad uga sii dari karto.
Sidoo kale waxa uu sheegay in xaa lada (laba milyan iyo laba Boqol oo qof oo kun) oo Soomaali ah ay hadda la liit aan gaajo una baahan yihiin cunto iyo gargaarBani’aadanimo oo deg deg ah.
Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in hadda kaliyA la helay (Tod obo bolol iyo Toban Malyan) oo dollar ka Mareykanka ah oo gar gaar deg deg ah loogu iibin rabo dadka ay abaarti sa ameysay ee ku nool Gudaha Somaliya.
KOOX BURCAD AH OO MUQDISHO LAGU QABTAY.
Taliska Ciidanka Booliska Soomaali ya ayaa waxaa ay faah faahn ka bixiye en howlgal Ciidamada Booliska ay ka sameeyeen degmada Howl wadag, kaas oo lagu soo qabtay Ko ox Burcad ah. Taliye kuxigeenka Ciidan ka Boolis ka Soomaaliyeed Zakiye Xuse en ayaa sheegay in Ciidamada ay gaca nta ku dhigeen laba Nin oo Burcad ah, kuwaas oo dhac ka geysanayay Gud aha Suuqa Bakaaraha.
"Ciidamada Boliiska degmada How lwadaag ayaa ku guuley stay in ay gacan ta ku soo dhigaan labo burcad oo hubay san oo bulshada ku dhacaayay suuqa Bakaaro. Waxaan shacabka deg mada ugu mahad celineenaa gacan siinta soo qabashada burcadka ayay tiri Zakiya Xuseen.
Maalma ka hor ayay aheyd markii Gudaha degmada Xamarweyne ee Gob olkan Banaadir ay isku rasaaseeyeen Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soom aaliya koox burcad ah,wallow markii da mbe saddex ka mid ah la qabtay.
RW KUXIGEENKA DALKA OO BAAQ U DIRAY SHACABKA SOOMAALIYEED
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka XFS Md. Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo ka hadlay munaasabadda Maalinta Deegaanka Adduunka ee shanta Juun ayaa ku baaqay in la isu xilqaamo hagaajinta deegaanka. "Anigoo ku hadl aya maga cayga iyo magaca xukuumadda Soomaaliyeed waxaan ra baa inaan diro qaylodhaan deegaan ta as oo ku qotonta sida deegaankeennu u sii baaba’ayo lana joogo waqtigii qof kasta uu isuxilqaami lahaa sidii deega ankeennu u noqon lahaa mid saamax aya nolosha jiilka haatan iyo kuwa dhal an doona”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare kuxigeenka dalku.Isagoo Sidoo Kale sheegay in Dikhowga Hawada uu si guud sannadkii u galaafto nolosha dad kabadan 7 malyuun oo ruux kuwaas oo eersada ku noolaanshaha deegaan was akheysan, Neefsashada hawada wasa kheysanna ay ka mid ah dikhwoga saba bi kara khatarta caafimaad, dhibaato dhaqaale iyo bedqabka bulshooyin caalamka.
Md. Mahdi Maxamed Guuleed (Kha dar) ayaa sheegay Jarista dhirta iyo gub ista dhuxushu ay qayb ka yihiin kororka dikhowga hawada ee dalka iyada oo sidoo kalena maareyn xumada qashinka iyo qiiqa gawaarida dalka oo badankoo du gaboow yihiin ay qayb weyn ka yihiin wasakhowga hawada taas oo ka dhigay sa waddaankeena mid halis ay kujirto caafimaadkiisa iyo bedqabkiisa.
R/Wasaare kuxigeenka ayaa cadde eyay in Soomaaliaya ay diyaar u tahay inay qayb ka ahaato dedaalada caalami ga ah ee lagu xakamaynayo wasakhe ynta hawada, oo ay abuurayso dedaal taariikhi ah oo ku aaddan bedqabka dee gaanka Soomaaliya kaasoo ay qayb ka tahay; maalgashiga tamarta, maareynta qashinka, xakamaynta dhir jarista iyo hubinta tayada iyo bedqabka dhamma an qaybaha deegaanka.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa muhi imad gaar ah siinaysan wax ka qabash ada dhibaatooyinka deegaanka ragaad iyey oo ay ka mid yihiin; isbedelka cimil ada, xaalufka iyo nabaad guurka, dabar go’a duurjoogta, xaalufinta dhirta, qash inka, xaalufka kheyraadka badaha & berriga ba.
Tan iyo sannadkii 1974, 5ta Bisha Juun ayaa dunida waxaa laga xusaa Ma alinta Deegaanka Adduunka taas oo lo oga golleeyahay inay qayb ka ahaato wacyigelinta arrimaha deegaanka isla markaana ay bulashooyinka caalamku ku dedaalaan sidii ay diiradda u saari la haayeen dhiba atooyinka waaweyn ee ra gaadiyey deegaanka. Sannadkan 2019, waxaa uu caalamku isla qaatay in "Dikh owga Hawada” uu noqdo dhibaatada de egaan ee diiradda lagu saari doono xus
CIIDANKA KENYA IYO ALSHABAAB OO DAGAALAMAY IYO KHASAARO KA DHASHAY
Dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab iyo Ciiddanka Kenya ayaa la sheegay In uu dagaal ku dhex maray Deegaanka Fiino ee Degmadda Mandhera ee W/ bari ee dalkaasi. Guddoom iyaha Gobalka W/bari Kenya, Mohamed Nirik ayaa xaqiiji yey inuu dhaacay iska horimaad kaasi oo lagu dilay Askari ka tirsan Bolis ka Kenya ee NPP iyo Dagaalame ka tir san Al sha baab, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxa kale oo uu sheegay inay tiro aan la aqoonin ku dhawaacmeen dagaalka asi oo ay Alsahabaab iyo Ciiddanka Ken ya foolkafool ugu dagaalameen Tuull adda Dawaduba ee Deegaanka Fino.
Dagaalamayaasha weerraka geystay ay aa la sheegay inay gudaha u galeen De egaanka Fino oo 6 KM u jira xuduudka Kenya la wadaagto Somalia.ma aha ma rkii ugu horreysay ee ay Dagaalamayaa sha Alshabaab weeraro ka geystaan De egaanka Fino, waaxayna horey u be egsadeen, ila markaana burburiyeen Ta awarada Shirkadaha Isgaarsiinta Kenya ee ku yaalla Deegaankaasi.
DHAGAX DHIG LAGU SAMEEYAY WADOOYINKII KU BURBURAY DAADADKA ROOBAB KII DA’AY
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, Ahna kusimaha Madaxweynaha Md. Ax med Cilmi Cismaan Karaash ayaa maan ta daahfuray dhismaha wadada halbowl aha ah ee Garoowe ilaa Sinujiif, wadda da ayaa waxaa waxyeelo u geystey da adadka roobabkii da’ay.
Daahfurka dib u dhiska wadooyinka go’ay ayaa waxaa Kusimaha Madaxwey naha Ku wehelina ayey Guddiga Gurma dka Fatahaadaha Rooobka, maamulka gobolka Nugaal, Kan degmada Garoo we, Afhayeenka Madaxtooyada Puntla nd, shirkado wadani ah oo ka qayb qaa danaya dhismaha wadada iyo masuuliy iin kale.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa ku dheeray muhiimadda ay leeda hay wax wadaqabsiga iyo isku duubnida shacabka iyo dowladda, waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay dowladdu ka nasan marna tan iyo intii ay go’day wadadu, de daalkaasina uu dhalay in shalay la bil aabo wejiga koowaad ee dhismaha wa dada."Waxaan u mahadcelinayaa cidk asta oo isu xilqaantay, mahad waa leey ihiin la kiin waa waajibaad dhammant een ina wadasaaran, waajibaadkaasi in tii gu datay waan u mahadcelinayaa oo ay ka mid yihiin shirkaddaha gaar ka loo leeya hay, kuwa dowladda iyo gaadiidle yda re er Puntland waa mahadsantihiin.”
"Waxaan Kaloo farayaa xukuumadd a inay il gaar ah ku eegaan cid kasta oo ka qayb qaadatay, waayo sharaf ayay mudan yihiin, in la xuso ayay mudan yih iin. Tani waa bilaw, waxaan ku dedaalay inaanay cidina nasan maaalmaha ciida, dowladda waa farantahay dedaal kasta oo dalka la isugu furayo, Insha Alla si deg deg ah ayay u furmidoontaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Kuxigeenka Puntland.
Ugu dambayn, Madaxweyne Kuxigeen ka Puntland, Ahna kusimaha Madaxwey naha ayaa u mahadnaqay shacabka ka qayb qaatay dhismaha wadada, waxaa na uu xusay in hadda dedaalkeeda lagu jiro isu furka dalka, dhawaanna la bilaab idoono dhismihii weynaa ee wadada, sidoo kale wuxuu ganacsatada iyo sha cabka intooda kaleba ugu baaqay inaan loo kala harin dhammaystirka wadooyol inka burburay.
MAGAALOOYINKA TONGXIANG IYO GAAL KACYO OO LA MATAANEEYAY
Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo waftigii bal aadhnaa ee uu hogaaminayey oo kala ahaa Wasiirada Wasaaradaha Duulista Hawada iyo Garoomada Xuseen Cism aan Lugatoor, Kalluumaysiga iyo Khay raadka Badda Faarax Maxamuud Cawaash, Ta marta, Macdanta iyo Bi yaha Axmed Maxamed Yuusuf (Taaran), Ganacsiga, Warshad aha iyo Maalga shiga Cabdullaahi Max amed Cabdi. Wafdiga Madaxweynaha ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Shiin aha waxaa u hirgalay kulamo iyo booq ashooyin Xarumo Dowladeed, Wersh edo wax soo saar, Goobo caafimaad iyo Rugta Ganacsiga.
Sidoo kale waxay weftigu wadaha dalo miradhal ah la yeesheen madaxda wadanka Shiinaha iyo Shirkado Ganacsi oo caalami ah. Wadahadaladaasi waxa ay ahaayeen kuwo lagu dardargelinayo mashaariicdii horey u socotay, sida dhi smaha garoonka diyaaradaha Gaalkac ayo, wadada Eyl iyo Garoowe isku xirta, dhamaystirka wejiga labaad garoonka diyaaradaha Boosaaso iyo in maalgashi loo helo kheyraadka dalka iyo kaabayaasha adeegyada bulsha da,sida Biyaha, Korontada, Kalluu mays iga iyo hirgelinta duulimaadyo Caalami ah.
Waxay Weftigu la saxiixdeen Madaxda caasimadda Tongxiang ee gobolka Jiaxi ng Zheijiang laba Heshiis oo kala ah:
1. Mataaneynta labada magaalo ee Tongxiang iyo Gaalkacayo, kuwaas oo yeelanaya Iska ashi iyo
Qorsheyaal horumarinta magaalooy inka ah.
2. In aag u gaar ah dhaqaalaha laga hir geliyo Puntland " Horn of Africa Special Economic Zone”, barnaamijkan Maalgelintiisa iyo fulintiisa waxaa yeela ndoonta
Hay’adda caalamiga ah ee Tongxiang Economic Development zone.
Heshiisyada dhaxalgal ka ah waxaa dhi naca Puntland u saxiixay Wasiirka Was aaradda Ganacsiga iyo Wershe daha Puntland Mudane Cabdullaahi Maxam ed Cabdi.
FU’AAD SHOONGALE OO MUD KA DIB KA SOO MUUQDAY FAGAARE
Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf oo loo yaqaan Fu’aad Shongole oo ka mid ah saraakiisha sare ee AlShabaab ay aa sanado ka dib meel fagaa re ah kasoo muuqday shal ay. Shongo le oo horey u ahaan jiray ma daxa dacwa da kooxda AlShabaab ayaa boq olaal dadweyne ah iyo ciidamada AlShabaab daraad ku la ciiday magaalada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe oo kooxda AlShabaab ay gacanta ku hay so. Shongole ayaa halkaas ka jeediyey khudbad uu kula hadlay shacabka deg an Saakow.
Sawirradiisa ayaa waxaa baahiyey warbaahinta AlShabaab, waxaana wara rka ay sheegayaan inuusan iminka wax xil ah oo sare ka hayn Alshabaab, taas ina ay tahay sababta ay u baahiyeen mu uqaalladiisa iyo halka uu joogo.
AlShabaab ayaan inta badan shaa cin muuqallada iyo goobaha ay ku sug an yihiin saraakiisha sare ee Alshabaab
Fu’aad Shongole ayaa la sheegay in im inka uu yahay kaliya wadaad dadka wa cdiya oo kooxda ka tirsan, balse aanwax xil ah oo muhiim ah ka hayn. Xigasho:shaaciye.com
MAS’UULIYIIN SOOMAALI AH OO LAGA MAMNUUCAY INAY GALAAN KENYA
Ilo ku dhow Dowladda Kenya ayaa sheegay inay dalkeeda ka mamnuucday 66 Saraakiil Somaali ah, xilli uu Khila afka Diplomaasiyadeed ee labada wad dan uu sii laba kacleeyey.
Wargeyska The Standard Media ee ka soo baxa magaalada London ayaa qoray inay xogtaasi ka heleen ilo aan magacyadooda la sheegein, kuwaasi oo u soo gudbiyey Liiska Qarsoodiga ee magac yadda Saraakiisha Soomaalida ee ay Dowladda Kenya ka mamnuucday inay dalkooda soo galaan.
Wargeyska The Standard Media waxa uu qoray in Liiskaasi ay ku jiraan magac yadda Wasiir ka tirsan XFS, Xidhibaan ka tirsan Barlamaanka Federalka Somal iyaiyo mid horey uga tirsanaa, Ra’isulwasaare hore, Taliyexigeen Hay’ad Am ni, Milkiilayaal Shirkad Isgaarsineed iyoMuwaadiniin Kenyan oo qaarkood la sheegay inay ku hayb ah Madaxw eynah a DFS, waa sida uu qoray Wargeyska The Standard Media.
Ma jiraan war rasmi ah oo ay Dowl adda Kenya ilaa iyo haatan ka soo saa rtay Liiska dadka Soomaalida ee la shee gay in laga mamnuucay inay soo galaan dalkeeda.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Kenya waxay bishii hore Garoonka Jo mo Kenyatta ku xayireen Wasiirta Ta marta iyo 2 Senator oo ka tirsan Aqalka Sare ee Barlamaanka Somalia, kuwaasi oo dib loogu soo celiyey Muqdisho.
AXMED MADOOBE: DASTUURKA UU MAD AXWEYNAHA KU YIMID HADDII LA IXTIRAA MIWAAYO SOOMAALIYA WAY IS GARATAY OO NIN KA XOOG BADAN NIN KALE MA JIRO
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa isagoo caro muu jinaya waxa uu mar kale ku celiyay in Jubbaland ay xaq u leedahay fulinta doo rashadeeda, cid kusoo faragalin kartana aysan jirin.
"Waxa lagu dhaqmayo waa dastuur ka ay leedahay Jubbaland, cid faragalin ku sameyn kartana ma jirto. Warqadda maalin dhaweyd uu qorayay wasiirka arrimaha gudaha waxay ahayd howshii looga baahnaa markii maamul gobolee dyada la dhisayay, marka waxaa fiic naan lahayd dhaqankaas inaad iska dey saan," ayuu yiri Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubbaland, ayaa isagoo la hadlayay madaxda dowladda federaa lka wuxuu sheegay in dhammaan mad axda Soomaaliya ay ku yimaadeen dast urka, sidaas awgeedna uu dastuurka fe deraalka iyo kan maamulgobolleedkaba xaq u siinayo in Jubbaland ay qabs ato doorashadeeda.
"Madaxda dowladda Federaalka wa xaan dhihi lahaa waddankan booguu lee yahay, walina ma bogsanin waxay u baahan yihiin in la dhayo iyo in sharci la gu dhaqo, balse laguma wada joogi karo 'anaa idhi', qaacidadii aan daraad Shaba ab ku diidday ma aqbalayo in Villa Soo maaliya laga soo yeeriyo, ha u hoggaa nsamaan sharciga ay ku joogaan, haddey u hoggaansami waayaanna qof walba irridiisa ayaa loo baneynayaa."
"Waxaan oran lahaa dowladda dhexe ha ilaaliso waxa heshiiska lagu yahay, dart uur baa lagu wada yimid, madaxweyna ha, ra’iisul wasaaraha, afhayeenka baarl amaanka, xiildhibaanada, dhammaan waxay ku imaadeen dastuur, haddii isaga la wa ayo Soomaa liya way is ga ratay oo nin ka xoog bad an nin kale ma jiro." Ayu u ku daray.
Axmed Madoobe oo dowladgobol leedka Jubbaland hoggaaminaya tan iyo markii la aasaasay ayaa mar kale doo naya inuu xilka u tartamo xilli doorash ada waqtiga loo ballansanyahay ay ka dhimantahay muddo afar bilood ah.
TRUMP OO KA QEYB GALAY XUSKA DDAY
Madaxweynaha Maraykanka D. Tru mp ayaa Arbacadii daraad boqoradda Britain Elizabeth u raacay magaalada bariga dalkaas ku taalla ee Portsmouth, halkaas oo uu ka dhacayey xuskii 75aad ee maalinta loo yaqaan DDay oo ah maalinta dalalkii xulufada ahaa ay ku du uleen deegaanka Normandy ee xeeba ha Faransiiska, duullaankaas oo keenay in Nazigii laga adkaado, ugu dambey nna uu dagaalkii 2aad ee dun idu soo gabagaboobo.
Hogaamiyeyaal dhowr iyo toban ah ayaa iyaguna goobta joog ay, kuwaas oo ku jiraan RWha Britain Theresa May, Madaxweyn aha Faransiiska Emmanuel Macron, RWha Canada Jus tin Trudeau, kuwaas oo dhamaantood amaanay gee sinimada askartii qeybta ka ahaa weerar kii dhinaca biyaha ee dunida ugu wey naa, kaas oo ay ciidanka Jarmalka kaga hortageen.
MEYDAD LAGA SOO SAARAY WEBIGA NILE EE SUUDAAN .
Ku dhawaad 40 qof ayaa laga soo saaray webiga Nile ee mara barta maha magaalada caasi mad da ah ee Khartu um kaddib markii howlgal rabshado orseeday lagu qaad ay dad dibadbaxyo higayay, sida ay sheegeen uololeeyaa sha muc aaradka.Dhakhaatiir lala xiriiriyay mucaar adka ayaa waxay shee geen in meydad ka ay kamid yihiin 100 qof oo la rumeys an yahay inay dileen laamaha ammaan ka Suudaan tan iyo Isniintii oo ay weerar ku qaadeen goobo ay ku sugnaayeen dibadbaxyaa sha.
Wararka waxay sheegayaan in la ga cabsi qabo in kooxaha sida militariga u tababaran ay weerarayaan shacabka dalkaas.Golaha saree ee militariga Suu daan waxay sheegeen inay baarayaan dhacdooyinka shacabka badan lagu laayay.
"Meydad 40 ah oo ah shuhadadee na sharafta leh ayaa shaley laga helay webiga Nile” ayaa lagu yiri qoraal barta Facebook ay kusoo qoreen guddiga dha khaatiirta Suudaan.
MAREYKANKA OO DUQEYN LA BEEGSADAY DAACISHTA SOOMAALIYA
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay xubno ka tirsan kooxda Daac ishta Soomaali ya ku dileen du qeyn 4tii bish an ka dhacday buuraha Goolis ee gobolka Bari ee Ma amulka Puntland.
Duqeyntan ayaa ah tii toddobaad oo bishii u dambeysay lala beegsado Ur urada Daacish iyo AlShabaab ee buu raha Goolis.
"Waxaan sii wadi doonnaa inaan ca daadis saarno shabakadaha argagixisa da Soomaaliya, si dowladnimada ay u hanaqaado” waxaa sidaas yiri Jeneral William P. West, oo ah agaasime kuxig eenka howlgallada ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
Jeneral West ayaa sheegay in Mar eykanka iyo dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonaan inay ka faa’iideystaan fu rsadaha ay ka helaan kooxahan loogu yeero argagixisada si loo arbusho howl galladooda, loona wiiqo awooddooda.
Weerarkan dhacay Arbacadii ayaa waxaa lagu dilay lix ka mid ah kooxda Daacish,sida lagu sheegay Warka ka soo baxay Africom.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheeg ay inay rumeysan yihiin in dad shacab ah aysan wax ku noqon duqeyntii ugu dambeysay ay ka fuliyeen Gobolka Bari.
Gabadh 17 jir ah oo u dhalatay dal ka Netherlands ayaa si sharci ah loogu oggolaaday inay isdisho kaddib markii kufsi loo geystay iyada oo da'yar ayna muddo wajaheysay dhibaatooyin badan, sida laga soo xigtay Wargayska New York Post.
"Jacaylka waa in sida qofka uu rabo loo yeelo," ayey ku sheegtay fariin ay soo dhigtay barta Instagramka, iyada oo hal kaasna ku shaacisay go'aankeeda ah inay isdili doonto.
Pothoven oo faraxumayn loo geystay iyada oo 11 sanno jir ah ayaa sheegtay in saddex sano kaddib kufsi loo gaystay taa sina ay u horseeday inay murugo ku noolaato.
"Waxaa laga yaaba inay tani dad ba dan ka yaabiso, mud do dheer ayaan isbi taal ku jiray, qorshahaygana wax badan ayaan ka fikirayay mana isbadelaayo," ayey tiri gabadha.
"Waan neefsadaa, balse ma noolayn."
Carruurta u dhexeeysa 12 ilaa 16 jir ee ku nool Netherlands ayaa u baahan inay fasax weydiistaan waliidkooda ayna la tashadaan dhakhtar ka hor inta aysan go'aanka gaarin.
Balse marka ay gaaran 17 sanno uma baahna inay fasax weydiistaan wa alidkood, waxayna qaadan karaan go'a an u gaar ah. Pothoven ayaa 17 sanno ji rsatay bishii Diseembar ee sannadkii la soo dhaafay.
Dalka Netherland ayaa sharciyeey ar rinkan sannadkii 2001sii, isla sannad kaas ayeyna gabadhan dhalatay.
Ma jiraan warar sheegaya inay waali dkeed ka hor yimaadeen go'aankan, iya da oo la sheegay in sannad ka hor ay dii deen inay fasax siiyaan gabadhooda, maxaa yeelay waxay filaayeen in daa wooyinka ay gabadhooda qaadato ay caawin doonan.
Gabadhan ayaa sheegtay inaysan qo fna u shegin dhibaatooyinkii ay la kul antay xilligii ay yareyd, maxaa yeelay waxay ka cabsanaysay in asxaabteeda ay si xun u arkaan.
Pothoven waxa ay sheegtay inay Is ku dayday inay go'aankan ka noqoto ay na booqatay isbita ala badan balse ays an helin awood ay ku sii noolan karto.
Waalidkeed ayaanan war u haynin dhibaatooyinka gabadhooda loo gaystay xilligii ay ka war heleenna ma aysan aw oodin inay go'aankeeda baddelaan. "A ad ayaan u yaabay," ayey tiri hooyade ed. "Ma aanan fahmin. Noa waa gabadh fiican, qurux badan, aqli badan, furfuran. Sid ay suurtagal ku tahay inay rabto in ay isdisho?
"Ma aanan helin jawaab cad weli. Wa xa kaliye ee aan maqalnay ayaa ah ina ysan nolosheeda wax micna ah aysan hadda u lahayn, anaga haddaan nahay waalidkeeda waxaan jeclaan lahayn inay sii noolaato"Aabbaheed, Frans, wa xa uu sheegay inuu rajaynayay inuu ar ko gabadhiisa oo nool.
Dad ka badan 6500 oo qof oo u dha shay Netherland ayaa isdilay sannadkii 2017dii, Dalka Belgium ayaa sidoo kale dadka u ogol inay isdileen haddii uu dha khtar u fasaxo Xigasho: BB C.
WASIIRKII HORE EE WARFAAFINTA SOOMA ALILAND OO GEERIYOODAY
Waxaa Magaladaa Amkara ee dalka Turkiga ku geeriyooday Wasiirkii hore ee Warfaafinta Soomaaliland xilligaana ka mid ahaa Xubnaha Golaha Wakiilad a Maamulkaas.
Alle ha u naxariistee Marxuum Cali Sh. Ibraahim oo loo yaqaanay(Aareeye) ay aa maalmihii la soo dhaafay waxaa uu ku sugnaa dalkaasi,kadib markii halka asi loogu qaaday xaalad caafimaad.
Sidoo kale waxaa uu mar soo noq day Wasiirka Warfaafinta Soomalailand o uu mudo haayay,waxaana geeridiisa ka tacsiyadeeyay Xisbiga WADANI oo uu Marxuumka ka tirsanaa.
Rasaas ayaa weli shalay laga ma qlayey magaalada Khartoum ee caa sim adda dalka Sudan ayada oo xiisad ay halkaas ka kacsan kadib laba maalmo od oo ciidamada amm aanka ay dileen 60 qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha.
Isbitaalada magaalada Khartoum ay aa sheegay inay la xarbinayaan inay la tacaalaan tirada dadka dhaawaca ah ka dib markii ciidamada ammaanka ay Isni intii billaabeen weerar ka dhan ah shac abka dibadba xa fadhigga ah ka wada dibedda xarunta ciidamada.
"Xaaladda aad ayay u adag tahay. In ta badan isbitaalada waxaa soo gaaray dhaawacyo ka badan inta ay xamili kara an” waxaa sidaas wakaaladda wararka ee AFP u sheegay dhaqtar ka shaqeeya laba isbitaal.
"Waxaa jira shaqaale yari caafimaad, waxaa jira dhiig yari, waxaana adag in la fuliyo qalliinada qaar, sababtoo ah isbitaallada qaar unbaa fulin kara qalliinada qaarkood” ayuu yiri.
"Dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah kuwa ay xaaladdoodu liidato, waxaana u malayanyaa in dhimashada ay kordhi doonto.”
Dhinaca kale, hoggaamiyaha milatariga haya talada dalka, Jeneral Abdel Fattah Burhan ayaa shalay sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal ka galo mustaqbalka dalka, maalin kadib markii uusidaas diiday
GAADIID FARABA DAN OO KU XAYIRAN DULEEDKA GAROOWE
Gaadiidkaan oo ah kuwa Xamuulka qaada ayaa sida badeecado kala duwun ,waxaana ay kasoo baxeen M/Boosaaso ee G/Bari,iyaga oo ku xayiran meel dhowr km Bari ka xigta M/ Garoowe.
Gaadiidkaan ayaa ku xayiran Wadada u dhaxeysa Magaa looyinka Garoowe iyo Khardho,waxana badeecada ha ay ka keeneen Dekadda Magalada Boosaa so,iyada oosababta ay u xayiran yihiin lagu sheegay in Wad ada ay go oyeen ro obabkii daadadka watay ee dhawaan ka da’ay deegaanada Gobolada Bari iyo Nugaal ee Puntland.
Dadkii saarnaa Gaadiidkaas oo ku wajahnaa deegaan ada Gobolada Dhe xe, deegaanada Puntland,itoobiya iyo Soomaaliland ayaa bilaabay inay lug uga gudbaan meel aha ay Biyaha wad ada ka gooyeen,iyaga oo alaabad ooda fudud gacanta ku sita.
Darawalada qaarkood ee Gaadiidka ku xayiran duleedka Bari ee Magalada Garoowe ayaa waxaa ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in badeecadaha qaar ay goobtaasi ku halaabaan maadaama mudo ku dhow todobaad ay halkaasi ku xayiran yihiin.
Madaxda Hay’adda wadooyinka pu ntland ee (PHA) ayaa sheegtay inay wa do qorsho dib loogu hagaajinayo wadoo yinka ku burburay roobkii ka da’ay Punt land si ay isugu furmaan Ganacsiyada kala duwan ee deegaanada Maamul kaas.
XUKUUMADDA SOOMAALIYA OO BAAQ U DIRTAY SHACABKA,XILLI LAGU JIRO MAALMAHA CIIDA
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS Md. Maxamed Cabdi Xa yir Maareeye ayaa shacabka Soomaali yeed ee ciideysanaya ugu baaqay, iney ka shaqeeyaan nabadgel yada dalka ay na la shaqeeyaan Ciida mada qalabka sida.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladu ay tahay adeegayaal u shaqeeya Shac abka Soomaaliyeed, wuxuuna tilmaam ay in ay u taagan tahay in Shacabku ay helaan adeegyada ay xaqa u leeyihiin sida, Waxbarasho lacag la’aan ah, Ca afimaad iyo adeegyada kale, isagoo xusay in ay dowladu ay ku dadaaleyso sidii muwaadin kasta meel walba uu ta gyo loogu xushmeyn lahaa Soomaalini mada.
Iyadoo shalay ay tahay maalinta la baad ee Ciidul fidriga ayaa waxaa mag aalada Muqdisho iyo Gobolada dalka si weyn uga socda dabaal degyada lagu soo dhaweeynayo maalinta labaad ee Ciida, waxaana ammaanka si weyn u adkeeyay Ciidamada dowlada Soom aaliya.
XOG CADDAYN BUUXDA U AH HORUMAR LA’AANTA MAN UNITED
Man United ayaa booska lixaad kaga dhammaysatay miiska kala sarreynta ee Premier League iyada oo gabi ahaanba koob la’aan baxday kaddib markii sidoo kale laga reebay tartamada Champions League, FA Cup iyo Carabao Cup.
Xiddigahaas ayay kamid yihiin Chris Smalling, Phil Jones, Romelu Lukaku, Ashley Young iyo Alexis Sanchez oo dhammaantood wajahaya hubaanti la’aan mustaqbalkooda ah.Red Devils ayaa xilli ciyaareedyadii dhawaa u muuqday kuwo horumar la’aan ah waxaana haatan la helay xog muujisay sababta keentay hor usocod la’aanta kooxdan. Xogtaas ayaa ah in wali Man United ay joogaan 18 ciyaartoy oo kamid ah safkii kooxda ee sanadkii 2015 (Afar sano kahor) waana sabab muujinaysa sida aysan Man United ugu soo fiicnayn is cusboonaysiinta kubadda cagta casriga ah